The Battle of Borodino e 1812 - impi eyathatha olulodwa kuphela, kodwa ezigcinwe emlandweni womhlaba phakathi izenzakalo zezwe ebaluleke kakhulu. Lokhu igalelo Napoleon kuthathwe indawo, enethemba lokubona ngokushesha anqobe Empire isiRashiya, kodwa izinhlelo bakhe baya nenkinga enkulu. Kukholakala ukuthi impi ye Borodino kwaba esigabeni sokuqala kokuwa umnqobi abadumile. Yini ngempi ukuthi uyikhazimulisile Lermontov emsebenzini wakhe edumile?
The Battle of Borodino e 1812: Ingemuva
Kwakuyisikhathi lapho amabutho Bonaparte BakaJehova sebetholile kakade wakwazi niwunqobe cishe wonke yezwekazi laseYurophu, amandla zombusi luboniswe ngisho Afrika. Wagcizelela nakwezinye izingxoxo aba nazo eseduze ukuthi ukuze uthole nokubuswa kwezwe, washiya ukuthenga kuphela ukulawula emazweni Russian.
Ukuze anqobe indawo eRussia, wabutha ibutho, inani ezingafinyelela abantu abangaba yizinkulungwane ezingu-600. Ibutho isihambile ngokushesha ku isimo. Nokho, amasosha sikaNapoleon, omunye ngemva komunye wanqotshwa ongumlimi nabezempi, impilo yabo sawohloka ngenxa sezulu elibuhlungu ngokungavamile futhi kungabi nekudla lokondla umtimba. Noma kunjalo, ukukhuthazwa kwezinhloko zamaviyo kwakuthe bhé, izisulu inhlokodolobha French.
Impi onegazi Borodino e 1812 yaba ilungu le-amacebo eyayisetshenziswa ojenene Russian. Ziba buthaka ibutho isitha izimpi ezincane, isikhathi elinde buhlungu juqu.
The Battle of Borodino e 1812 empeleni limelela uchungechunge ehlanganisa izimpikiswano eziningana aba nazo amasosha French waphenduka ukulahlekelwa omkhulu nhlangothi zombili. Kwaba impi yokuqala edolobhaneni Borodino, esemgwaqweni mayelana 125 km kusuka eMoscow. Ohlangothini Russian ke yahanjelwa Jaeger Regiment de Tolly, yisitha - Ezezindlu Beauharnais.
The Battle of Borodino e 1812 ibambene phezulu, lapho impi wathatha indawo Bagration ukushiselwa. Kwaba khona abangu-15 zigaba semashi French futhi ezimbili Russian-elawulwa Vorontsov futhi Neverovsky. Kulesi sigaba, Bagration Uthole ukulimala kakhulu, okuyinto kwamphoqa ukuphathisa umyalo Konovnitsyn.
Ngesikhathi amasosha Russian kwesokunxele ukushiselwa, cishe amahora 14 yathatha Battle of Borodino (1812). Amazwibela imicimbi okwengeziwe: Russian ibekwe ngemuva Semenov udonga, lapho kukhona impi wesithathu. Amalungu aso avumelana abantu abahlasela ukushiselwa futhi abavikele. The French azowalekelela wathola, okuyinto eyaba mabutho, okuyinto iBhayibheli beqondiswa Nansouty. Ukusiza amasosha Russian waphuthuma abakhwele amahhashi Uvarov, futhi waba ngaphansi umyalo Cossacks Platov.
Kufanele futhi ucabangele esigabeni sokugcina umcimbi ezifana Battle of Borodino (1812). Indaba efingqiwe: Impi le Rajewski ibhethri, wangena umlando ngokuthi "ithuna ala mabutho anamakhanda isiFulentshi," yathatha cishe amahora 7. Le ndawo ngempela kwaba ethuneni ezihlukahlukene amasosha Bonaparte sika.
Izazi-mlando namanje uzibuze ukuthi kungani amabutho yempi Russian kwesokunxele Shevadinsky redoubt. It is hhayi ngaphandle ukuthi umkhuzi induna inhloso yayo ukuvula flank kwesokunxele ukuphazamisa ukunakwa isitha ukusuka kwesokudla. Yasungulelwa ukuvikela entsha Smolensk komgwaqo, sibambe ukuthi, ibutho sikaNapoleon elakhula ngokushesha wasondela eMoscow.
It kusindisa eningi ukubaluleka kumlando kwemibhalo asikhanyisela ngemithwalo umcimbi ezifana Impi Ye-1812 Battle of Borodino ohlala kuso kuyakhulunywa ngaso incwadi ngaphambi kokuba ithunyelwe ekuqaleni Kutuzov Russian umbusi. Umlawuli enkosini ukuthi isimo sezwe (endle) ngeke izothumela amasosha Russian izikhundla elilungile.
The Battle of Borodino (1812) efakwe kafushane wamboza zomlando eziningi kangaka, okunikeza umbono wokuthi kwaba isikhathi eside kakhulu. Eqinisweni, impi yaqala ngo-September 7 lapho kugamanxa ihora lesi emihlanu ekuseni, eyathatha isikhathi esingaphansi kosuku. Yiqiniso, ekugcineni kwahlaluka ukuthi phakathi zokuchitheka kwegazi okukhulu kunakho kuzo zonke izimpi emfushane.
Kuyinto imfihlo ukuthi izimpilo eziningi kwabulala neMpi Patriotic ka 1812. Impi Borodino ukwenze ingxenye walo wezimpi ezalandela. Inani eliqondile efile lungaqalwa mlando, ngokuthi zezinkulungwane 80-100. Abafile nhlangothi zombili. Ukubalwa ebonisa ukuthi njalo ngeminithi ku ukukhanya kokuthunyelwa akukho esingaphansi engamakhulu amasosha.
Okuvamile ethulwa ezihlukahlukene okufanele udumo War of 1812 Battle of Borodino Yiqiniso, ukhunjulwa umuntu njengami Kutuzov. By the way, Kutuzov ngesikhathi wayengakabi nendoda esimpunga ubudala, esiye ayivulwanga iso elilodwa. Ngesikhathi impi, nakuba indoda ukuguga wayesesokhalweni eyingqabavu, futhi akazange abeke isignesha yakhe ibhandishi.
Yiqiniso, Kutuzov wayengeyena iqhawe kuphela owayeneminyaka Borodino abadumile. Kanye naye wehlela emlandweni Bagration, Rajewski, de Tolly. Ngokuthakazelisayo, owokugcina wabo babenegunya wezempi, nakuba yayineminyaka engu-nombhali umbono omuhle kakhulu ukubeka yamelana butho lesitha yabashokobezi amabutho. Ngokwe-legend, ngesikhathi Battle of Borodino Jikelele kathathu walahlekelwa amahhashi ababhubha ngaphansi ithala amagobolondo amachashazi, kodwa waqhubeka bengenamiyocu kulesi sigameko.
Mhlawumbe lo mbuzo iyona nozungu eyinhloko impi kwegazi, njengoba zombili wathatha ingxenye kulo babe nemibono yabo kule ndaba. mlando French bayaqiniseka ukuthi insindiso enkulu ngalolo suku iwine amabutho sikaNapoleon. ososayensi Russian singaphoqi Kunalokho, ithiyori yabo ngesikhathi sasekelwa Alexander Okokuqala ekumemezeleni Borodino impi ukunqoba okuphelele Russia. By endleleni, emva Kutuzov waklonyeliswa elisezingeni Field Marshal.
Kuyaziwa ukuthi Bonaparte akazange aneliseke imibiko eziye enikeziwe ojenene lakhe laziwe. Isibalo izibhamu wathumba isiRashiya kwakuwulimi ongatheni, kanye isibalo seziboshwa bani ibutho emuva wayethatha naye. Kukholakala ukuthi umnqobi wagcina ochotshoziwe ugqozi isitha.
Ukuze ufunde mayelana Battle of Borodino
Le mpi emikhulu, elaqala ngo-September 7 eduze nedolobhana Borodino, amakhulu amabili eminyaka uye waphefumulela abalobi, izimbongi, abadwebi, abenzi mafilimu bese esehlanganise it emisebenzini yabo. Singase sikhumbule ifilimu "Hussar Ballad", nemisebenzi odumile Lermontov, manje ngoba siyafundwa esikoleni.
Yini ngempela waba yini waphendukela Battle Russian futhi isiFulentshi Borodino 1812? Buntman, Adelman - mlando baye wadala umbhalo emfushane olunembile, ukugqamisa ngokuningiliziwe impi wezimpi ezalandela. Abagxeki adunyiswe lo msebenzi yolwazi lihle kwenkathi, izithombe acacile impi namaqhawe (futhi ukuthi, futhi ngakolunye uhlangothi), okuyothi zonke izenzakalo Kulula ukucabanga ukhexile. Incwadi kufanele ngempela wokufundwayo kulabo abathanda kakhulu emlandweni futhi ezindabeni zezempi.
Mikhail Gavrilov: Biography futhi ukuphila siqu umlingisi
Imelda Marcos: Biography nesithombe
3D Cindezela ubuso ukufakelwa: impumelelo kuqala bese emisebenzi esizayo
"Point-U" (ukuhlela): izici, umzila wokulimala, isithombe
Pasties, e cheburek. Indlela ukupheka pasties okuzenzela - zokupheka
"Byustklinika": Izibuyekezo ikhasimende
Arthur Waha: Biography, amabhayisikobho, empilweni yakho
Ukudabuka of amadolo nemisipha
Indlela sigqoke club